Maroon5နဲ့ BTS တို့ Collaboration လုပ်ကြမှာလား
On January 18, 2018 January 22, 2018 By Atsuko
Update: Marron5ဖက်မှ ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သက်သေတွေကို အစအနဖျောက်သွား
Marron5က BTS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Tweet တွေအားလုံးကို ဖျက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်းကိုမဖွဖို့ တစ်ယောက်ယောက်ကပြောလိုက်လို့လား.. နဂိုကတည်းက အစီအစဉ်မရှိတာလား.. ဘယ်လိုပဲပြောပြော အကြောင်းရင်းမှန်ကို မကြာမီသိရှိနိုင်ဖို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။
Maroon5နဲ့ BTS တို့ရဲ့ Collab ?? ကြားလိုက်ရုံနဲ့ အမှန်အကန်စိတ်ဝင်စားသွားစေမယ့် သတင်းလေးပါ..
ဇန်နဝါရီ ၁၈ တုန်းက fan တစ်ယောက်က Maroon5ရဲ့ Tweet အောက်မှာ BTS နဲ့ collaboration လုပ်ပါလားဆိုပြီးတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမေးခွန်းကို Maroon5Twitter account က smiley face လေးတစ်ခုတည်းနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ကျလိကျလိဖြစ်သွားတဲ့ fan တစ်ယောက်က သေချာအောင်လို့ BTS နဲ့ collaboration လုပ်မှာတကယ်လားဆိုပြီးထပ်မံမေးမြန်းခဲ့တာကို “မသိဖူးလေ” လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ gif လေးနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာ နောက် fan တစ်ယောက်က ဒါဆိုအဖြေမှန်ကဘာလဲဟင် ဆိုပြီးမေးမြန်းခဲ့ရာမှာ “ဒါကိုမင်း handle လုပ်နိုင်လောက်မှာမဟုတ်ဖူးထင်တယ်” ဆိုပြီး reply ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
Maroon5ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့လကစတင်ပြီး BTS ရဲ့ twitter ကို follow လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း fan တွေက သူတို့နှစ်ဖွဲ့တစ်ခုခုလုပ်နေကြတာဖြစ်မယ်ဆိုပြီး တွေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Collaboration တကယ်လုပ်မလုပ် အဖြေမှန်ကို မကြာမီသိရှိရမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
ကဲ.. ဒီကိစ္စအပေါ် စာဖတ်သူတို့ရောဘယ်လိုမြင်ကြပါသလဲ? ‘Maroon5x BTS‘ Collab.. ? or ?!?
PREVIOUS POST Previous post: အသက် ၄၆ နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားတဲ့ Cranberries အဖွဲ့ရဲ့အဆိုတော် Dolores O’Riordan
NEXT POST Next post: TWICE ကျေးဇူးနဲ့ YG Entertainment ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျော်တက်သွားခဲ့တဲ့ JYP